InfoComm 2019: အသံလွှင့် Pix နယူးပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှု Switcher ကို, PTZ ကင်မရာထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ IP ကိုအလေးထားဖော်ပြသည် - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » InfoComm 2019: အသံလွှင့် Pix နယူးပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှု Switcher ကို, PTZ ကင်မရာထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ IP ကိုအလေးထားဖော်ပြသည်
InfoComm 2019: အသံလွှင့် Pix နယူးပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှု Switcher ကို, PTZ ကင်မရာထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အတူ IP ကိုအလေးထားဖော်ပြသည်
Chelmsford, Mass - ။ မေလ 16, 2019 - ။ အသံလွှင့် Pix ™၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုခလုတ်, BPswitch IX သရုပ်ပြအသုံးပြုပုံ Orlando တွင်, Fla အတွက် InfoComm 2019 (Booth 2091) မှာလာမည့်လတွင်ယင်း၏အိုင်ပီ-based ဖြေရှင်းနည်းများကိုအလေးပေးအဖြစ်က၎င်း၏ဦးမည် Expand IP ကိုထိန်းချုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်၎င်း၏အသစ်အ RCC IP ကိုကင်မရာက control panel ထဲကအတူသစ်ကိုဗားရှင်း 7.5 ဆော့ဖ်ဝဲ။
"အိုင်ပီအလျင်အမြန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် AV စနစ်စျေးကွက်၏အုတ်မြစ်ဖြစ်လာသည်နှင့်အသံလွှင့် Pix အိုင်ပီ-based Multi-ကင်မရာဘဏ်ဍာများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်," တိုနီ Mastantuono, အသံလွှင့် Pix များအတွက်ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာကရှင်းပြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် software ကိုအဆင့်မြှင့်အသံလွှင့် Pix အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးကိုမိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင်အခန်းထဲအနှံ့ကနေဒါမှမဟုတ်တိုင်းပြည်အနှံ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘဏ်ဍာကိုပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်စဉ် "BPswitch IX, IP ကိုထိန်းချုပ်ဖို့နှင့်အကူးအပြောင်းဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကမ်းလှမ်းကြိုးမဲ့နှင့်အမွေ SDI သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဝှမ်းကြီးမားသောကွင်းပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ Plus အားကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သော RCC controller ကိုတစ်ဦးအလွန်အလိုလိုသိ user interface ကိုနှင့်အတူသီးခြားကင်မရာကိုထိန်းချုပ်ယူနစ်များ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်။ "
BPswitch IX ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုအခန်းတစ်ခန်းထဲကနေ switched ဖြစ်ကြောင်းဝေးလံခေါင်သီကင်မရာများတပ်ဆင်ထားခန်းမ, အားကစားကွင်း, ညီလာခံခန်းနှင့်အခြားအဆောက်အဦများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာ NDI နှင့် RTSP ကင်မရာများနှင့်အခြားသတင်းရင်းမြစ်ကိုထောက်ပံ့သောခြောက်လကွန်ယက်ကိုသွင်းအားစု features ပေါင်းနှစ်ခု SDI /HDMI (အမွေသတင်းရင်းမြစ်တစ်ခု Analog စ input ကိုအပါအဝင်) သွင်းအားစု။ အဆိုပါဇာတိ 1080p / 60 system ကိုချောမွေ့စွာ, တူညီတဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် MPEG-2, H.264 နှင့်အခြား streaming များကို formats ပေါင်းစပ်ပြီးနှင့် SDI ထောက်ပံ့ HDMI, Analog စနှင့် streaming များလက်ငင်း။
အခြားအ BPswitch မော်ဒယ်များကဲ့သို့ပင် BPswitch IX အဆိုပါ NewBlueNTX Multi-layer ကို 3D ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်အောက်ပိုင်းသုံးပုံနှစ်ပုံ, bug တွေ, Animation, လိပ်ရိုးရှင်းဖို့တင်းပလိတ်များရာပေါင်းများစွာပါဝင်သော CG, crawls နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်။ အခြားအ built-in လုပ်ငန်းအသွားအလာ tools တွေကို Multi-အမြင်™ကလစ်များနှင့်ဂရပ်ဖစ်ရှစ်လိုင်းများ, DVEs နှင့်အတူသုံး keyers, အစီအစဉ်ကိုမှတ်တမ်းတင်, ဖိုင်-based ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသော, ClearKey ™ chromakey နှင့် Virtual စတူဒီယိုကို virtual အစုံနှင့်စိတ်ကြိုက် BPview ပါဝင်သည်။
အသစ်ကဗားရှင်း 7.5 software နှင့် optional ကိုအသံလွှင့် Pix တပ်မှူး™ touchscreen ကထိန်းချုပ်မှုပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအားလုံး BPswitch မော်ဒယ်များမိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင် browser ကို-based switching ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအဆင့်မြှင့်, ဆာဗာများနှင့်စက်ရုပ်ကင်မရာများ၏ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြုအားလုံးလုပ်ငန်းအသွားအလာ tools တွေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကို၎င်း, စံအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်မှတဆင့်ထုတ်လုပ်မှု element တွေကိုအပြည့်အဝ-ရွေ့လျားမှုကြည့်။ ထုတ်လွှင့် Pix ရဲ့ BPNet ™အိုင်ပီဂေဟစနစ်လုံလုံခြုံခြုံနဲ့အနိမ့်အောင်းနေချိန်နှင့်အတူစနစ်ရဲ့ control-over-IP ကိုစွမ်းရည်ကယ်တင်တတ်၏။
အဖြစ်က၎င်း၏ BPfusion CG အလိုအလျောက် software ကိုများအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးတက်မှု - version 7.5 လည်း router များ, ကင်မရာများနှင့် streaming များ CDNs များအတွက်ပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲကိုမည်သည့်သစ်ကို BPswitch စနစ်, အာမခံအောက်မှာမဆို system အတွက်အခမဲ့အဆင့်မြှင့်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါ, ဒါမှမဟုတ်အာမခံအောက်မှာစနစ်များမရှိတော့များအတွက် $ 995 များအတွက်ရရှိနိုင်နှင့်အတူပါဝင်သည်။
ဝေးလံခေါင်သီဘဏ်ဍာများအတွက်စံပြ, RCC ဆို BPswitch ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုခလုတ်, အသံလွှင့် Pix တပ်မှူး touchscreen ကထိန်းချုပ်မှုပလက်ဖောင်း, သို့မဟုတ်အခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှထုတ်လုပ်မှုခလုတ်နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံကင်မရာ controller ကိုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ယင်း၏ဆော့ဖ်ဝဲကို-သတ်မှတ်ဖွင့်လှစ်ဗိသုကာနှင့်အတူ, RCC PTZ နှင့်ထုတ်လွှင့်ကင်မရာများအမျိုးမျိုးကိုထိန်းချုပ်အဖြစ်စက်ရုပ်အကြီးအကဲများ, နှင့်အတူတူပင်ထုတ်လုပ်မှုအတွင်းက IP protocol များရောထွေးနိုင်ပါတယ်။
RCC ရဲ့ခုနစျပါးလက်မအရွယ် touchscreen အလိုလိုသိ menu ကိုအညွှန်းပေးပါသည်နှင့်စိတ်ကြိုက်ကင်မရာရလာဒ်ကဒိ, သေနတ်အမည်, နှင့်ပိုပြီးခွင့်ပြုပါတယ်။ ချိန်ညှိ zoom ကိုမြန်နှုန်းနှင့်အတူ Plus အား၎င်း၏သုံးဝင်ရိုး Joystick နှင့်တဦးတည်း-touch နဲ့အလိုအလျောက်အာရုံချောမွေ့, တိကျသောရိုက်ချက်ထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြုပါတယ်။ RCC Panasonic ကများအတွက်ဇာတိ IP ကိုထောက်ခံကြောင်းလည်းပါဝင်သည်နှင့် Sony က အခြားအကင်မရာများနှင့်စက်ရုပ်အကြီးအကဲများအဘို့အ optional ကိုထောက်ခံမှုနှင့်အတူ PTZ ကင်မရာများ။
InfoComm မှာထုတ်လွှင့် Pix ရဲ့ IP-based ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကဗီဒီယို preview ကိုများအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး bit.ly/2YuJYRo.
အသံလွှင့် Pix အကြောင်း
တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာ coupled ခလုတ်နှင့် 3D ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ် CG နှင့်အတူအသံလွှင့် Pix မူပိုင်ခွင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အလိုအလျောက်နည်းပညာနှင့်အတူပါဆုံးအပြည့်အဝပေါင်းစည်းတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းယူနစ်ကနေအကြီးစား, Multi-system ကိုဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့, တိုင်းအသံလွှင့် Pix ဒေသအလိုက်နှင့် IP ကျော်သင်၏ workflow ပိုကောင်းအောင်နှင့်စိတ်ကြိုက်ရန်လွယ်ကူစေသည်တစ်ခုကျယ်ပြန့် toolset ပါရှိပါတယ်။ Plus အား၎င်း၏ BPNet ဂေဟစနစ်လုံခြုံသောမိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပေးသည်။ 2002 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံလွှင့် Pix 100 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ဖောက်သည်များရှိပြီးအစိုးရ, ထုတ်လွှင့်, streaming များ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖြစ်ရပ်နှင့်အမြင်အာရုံရေဒီယို application များအတွက်အပြည့်အဝပေါင်းစည်းထုတ်လုပ်မှု Switcher အတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ www.broadcastpix.com.
ထုတ်လွှင့် Pix, broadcast Pix တပ်မှူး, BPNet, BPswitch, BPview နှင့် ClearKey broadcast Pix, Inc မူပိုင်ခွင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ Switcher USA တွင်လုပ်နေကြသည်။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့် Pix ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor InfoComm အိုင်ပီထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်မှု switcher SJGolden - လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဗီဒီယိုကိုခလုတ်	2019-05-16
ယခင်: အကယ်ဒမီဆုအတွက်အမည်တင်သွင်းအသံ Editor ကိုမာတင် Hernandez နှင့်အတူရုပ်ရှင်မီဒီယာအသင်းများအသံန်ဆောင်မှုများစတင်ရန်မှ
နောက်တစ်ခု: SMPTE ဟောလိဝုဒ်ပုဒ်မ 2nd နှစ်ပတ်လည်အလုပ်ရှာဖွေရေးနေ့အိမ်ရှင်အဖြစ်